Feiyu WG2, ihe mgbatị maka ese foto egwuregwu na - enweghị mmiri | Akụkọ akụrụngwa
Ndị ụlọ ọrụ Asia FeiyuTech amalitela a stabilizer - ma ọ bụ gimbal - maka egwuregwu ese foto. Nke a ga - eme ka onyogho ndị anyị na - edekọ mgbe anyị na - eme egwuregwu dị egwu ma ọ bụ mgbe mmiri na - ezo, ọ ga - aka mma ma na - enwe obere mmegharị ma ọ bụ mkpọtụ.
Ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ icheta ihe niile ha rụzuru mgbe ha na-eme egwuregwu dị egwu. Zọ kachasị mma iji mee ya abụghị iji ekwentị mkpanaaka, kama igwefoto egwuregwu. E nwere ọtụtụ ụdị na ahịa, mana ikekwe ndị kachasị ewu ewu bụ GoPro. Maka ndị a na ndị ọzọ dị ka igwefoto Xiaomi, Companylọ ọrụ FeiyuTech amalitela gimbal nwere ike iguzogide mmiri. Aha ya bụ Feiyu WG2.
Gimbal a dị fechaa (ihe na-erughị gram 300) na ochichi ya bu awa 2,5. Ọzọkwa, Feiyu WG2 bụ gimbal nke na-abịa site na nkwalite dị iche iche iji kwado ọnọdụ ọ bụla. Ọ dakọtara na omume dịka na-agba ọsọ, na-agba ịnyịnya ígwè, igwu mmiri, ọgba tum tum, ọgba tum tum gụnyere egwuregwu mmiri. Ga-eburu n'uche mgbe niile na oke omimi ị nwere ike iru bụ mita 0,5. N'ezie, ịmịpụ mmiri ma ọ bụ apịtị agaghị abụ nsogbu maka ihe nchekwa a maka igwefoto egwuregwu.
El Feiyu WG2 nwere ike ịdakwasị na sterịn ahụ, aka ịnyịnya ígwè, okpu agha, tripod, osisi selfie ma ọ bụ akwa iyi na obi. N'otu aka ahụ, FeiyuTech na-enyekwa ngwa mkpanaka nke ga-ejikọ gimbal na smartphone site na teknụzụ Bluetooth iji chịkwaa ndekọ ma ọ bụ ịse foto. Nke a ga-abụ ihe na-atọ ụtọ mgbe onye ọrụ chọrọ ịdekọ timelapse na ogo 360.
Feiyu WG2 dị maka ịzụta ma ị nwere ike ime ya site na ụlọ ahịa ya n'ịntanetị ma ọ bụ site na amazon. N'ezie, ọnụahịa ya abụghị ọnụ ala: 299 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Feiyu WG2, ihe mgbaka maka igwefoto egwuregwu na-enweghị mmiri
Sofia, AI robot nke yiri egwu ibibi ụwa, nwetara ụmụ amaala Saudi Arabia
WhatsApp na-enye gị ohere ihichapụ ozi ezitere